အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: လူသားဆန်သော... သူ
33 Responses to “လူသားဆန်သော... သူ”
November 4, 2010 at 12:20 AM
ဖတ်သွားတယ်နော်... ဟုတ်ပါတယ် လူတိုင်းသာ ရန်သူမိတ်ဆွေ မခွဲခြားပဲ တဦးကို တစ်ဦးက ကူညီကယ်တင်ပေးကြရင် ကောင်းမယ်နော်.... ရန်သူ မိတ်ဆွေမထားပဲ မိတ်ဆွေချည်းပဲဆို ပိုကောင်းမယ်နော်....
November 4, 2010 at 12:28 AM
အောင်ထွန်းရဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကိုတော့ မချီးကျူးပဲ မနေနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ..
November 4, 2010 at 12:35 AM
မချောရေ လူကောင်းလို့ သတ်မှတ်ထားကြတဲ့ လူအတော် များများ မှာတောင် ဒီလို စိတ်ဓါတ်မျိုး မရှိကြဘူးနော်။ ကျပ်မပြည့် ပေမဲ့ စိတ်ထားကတော့ မလျှော့ကျဘူးနော်...
November 4, 2010 at 1:20 AM
မချောရဲ့ ၀တ္ထုတိုလေးကိုဖတ်ပြီး.. စိတ်ထဲက အောင်ထွန်းလိုပဲ လူရိုင်းပဲဖြစ်ချင်လာတော့တယ်..
ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ တစ်ခါတ်လေတော့ လူယဉ်ကျေးလုပ်ရတာ မနိပ်လှဘူး.. ပြောချင်တာမပြောရ လုပ်ချင်တာမလုပ်ရ.. ဟိုဟာထိန်းသိမ်းရ ဒီဟာထိန်းသိမ်းရနဲ့.. ဒါကြောင့်ထင်တယ်.. စိတ္တဇရောဂါဟာ လူယဉ်ကျေးတွေမှာပဲ ဖြစ်ပြီး လူရိုင်းတွေမှာ မဖြစ်ဘူးတဲ့..
စိတ်ထဲက အောင်ထွန်းလိုပဲဖြစ်ချင်လာတော့တယ်.. ဘာမာယာတွေမှ မရှိပဲနေရရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ..
November 4, 2010 at 1:31 AM
ဟုတ်တယ်အမချောရေ.....လူကောင်းဆိုတဲ့သူနဲ့ ကောင်းတဲ့လူဆိုတာ ကွာခြားမှုတွေရှိတယ်နော်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကောင်းအောင်နေတဲ့သူနဲ့ ကောင်းတဲ့အရာတွေ ပေးနိုင်သူဆိုတာ အများကြီးကွာတယ်နော် ။
November 4, 2010 at 2:35 AM
ကျပ်ပြည့်လေ ကြောက်ရလေ...ချောရဲ့ တချို့လူတွေ ပြောပါတယ်....:)
November 4, 2010 at 6:02 AM
ကျပ်မပြည့်တဲ့လူတွေက နာမည်တွေကို ပိုမှတ်မိတတ်တယ်နော်..။
ကိုယ်က မြင်လျက်သားနဲ့ မကူညီပဲ မျက်ကွယ်ပြုတယ်ဆိုရင်တော့ လူသားမဆန်တဲ့သူပဲဖြစ်မယ်..။ အောင်ထွန်းလိုလူက ချီးကျူးထိုက်တယ်.
November 4, 2010 at 8:59 AM
လာဖတ်ပြီး ခံစားသွားပါတယ် အစ်မရေ.. ၀တ္ထုလေးတွေ ဆက်ရေးပါဦး..
November 4, 2010 at 9:48 AM
အားကြီးစာရေးနိုင်တဲ့ မချော ..
ရေးတဲ့စာလေးတွေကလည်း ကောင်းတယ်ပြောရလွန်းတော့ မောတောင်မောတယ်၊
သီချင်းတစ်ယောက်တည်းမကြိုက်ပါဘူး၊ မချောကြိုက်ဖို့ပါ ပိုတင်ထားတာ၊ :D
ညီမတော့ စာရေးဖို့ အာရုံမရလို့ .. ဂိမ်းပဲဆော့တော့မယ်၊ သူငယ်ပြန်တာလေ
ဖြစ်ရပ်မှန်လေးပေါ့နော်...ချီးကျူးစရာ စိတ်ထားပိုင်ရှင်ပါ ..မှတ်သားနာယူသွားပါတယ် ..အမရေ
November 4, 2010 at 9:55 AM
ချော ရေ ကိုယ် စာ လာဖတ်တယ်နော်
ချောကတော့ ရသ တခုခုကို ပေးမြဲပဲနော်
November 4, 2010 at 3:38 PM
လူ့အသက်တချောင်း ကို တန်ဘိုးမထားတတ်တဲ့ သူတွေ ရှိနေသမျှ အားလုံးအဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ဘူး စိတ်ဝေဒနာရှင်တောင် သိတယ် သူတို့ မသိတာ အံသြတယ်
ပူလောင်တာတွေ ရပ်ပြီး၊ ငြိမ်းချမ်းခွင့်လေးများ မသေခင်တွေ့ခွင့်ရပါလို၏။ :)
November 4, 2010 at 5:18 PM
ဘာမှမပြောတော့ပါဘူးဗျာ.... ငါးခူပြုံးလေးတော့ ပြုံးသွားတယ်။
ကျနော့်အယူအဆကတော့ တစ်ချို့ နေရာတွေမှာ တစ်ခြားသူတွေနဲ့ ကွဲနေမလားမသိဘူး။
အောင်ထွန်းလို စိတ်ဓါတ်ရှိတာ တကယ့်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်ဓါတ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲလို စိတ်ဓါတ်က လူကောင်းတစ်ယောက်မှာ ဘယ်လိုမှ မရှိနိုင်ဘူးလေ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်မှ ရေမကူးတတ်ပဲနဲ. ဆင်းကယ်ရင် ရေနစ်သူကို ကယ်ဖို. နေနေသာသာ ကိုယ်ပါ ရေနစ်သေမယ်ဆိုတာကို သိနေတဲ့ အသိဥာဏ်ကြောင့်လေ။
နောက်တစ်ခုက ကျပ်မပြည့်တဲ့သူတွေမှာ များသောအားဖြင့်က စိတ်ထဲမှာ အညှိူးနဲ့ အစွဲမထားတာ။ လူကောင်းတွေကတော့ အညှိုးတွေ အစွဲတွေများတယ်လေ။
ဘာတွေ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။ အောင်ထွန်းမှာ ရှိတဲ့ကောင်းတဲ့ စိတ်ဓါတ်မျိုးကို သူ.လိုကျပ်မပြည့်တဲ့အခါမှ ကိုယ့်မှာရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲလိုစိတ်ဓါတ်ကောင်းလေးတွေကို သတိလေးးထားပြီး အလေ့အကျင့်လေးးလုပ်ရင် ဖြစ်လာမှာပါ။
လူကောင်းတစ်ယောက်မှာ ဘာမှ များများစားစားမလိုအပ်ပါဘူး။ သူ.နေရာမှာ ကိုယ်သာဆိုတဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတရားလေးးသာ ထားနိုင်ရင်ကို အဲဒီ့လူက တော်တော်လေးးမြင့်မြတ်နေပါပြီ။ ဒီလောကမှာ ကိုယ်ချင်းစာတရားမရှိတဲ့သူတွေက တစ်နေ.ထက်တစ်နေ.များသထက်.... များသထက်... များများလာတာ.............
လေးစားစရာ အောင်ထွန်းလို လူတွေအများကြီး လောကကြီးမှာ ရှိ၇င် ဘယ်လောက်ကောင်း ။
November 5, 2010 at 12:32 AM
အောင်ထွန်းအကြောင်းလေး တော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသလို သနားစရာကောင်းတယ်နော်။
November 5, 2010 at 3:21 AM
အဲလို ဘယ်လုပ့်မလဲး)
November 5, 2010 at 4:43 AM
မမချစ်ကြည်အေး အဆိုကို အပြည့်အဝ ထောက်ခံတယ် ချောရေ........ ပြည့်လေကြောက်ရလေပဲ ...
November 5, 2010 at 5:01 AM
November 5, 2010 at 5:35 AM
November 5, 2010 at 6:40 AM
အတတ်တွေ အများကြီး တတ်နေတော့ လူသားဆန်မှုနဲ့ ပိုဝေးသွားတယ်လို့ ပြောလို့ရပေမယ့်
အတ္တတွေများနေသ၍တော့ လူလူချင်းကူညီ ကယ်တင်ဖို့ မျက်နာလွဲနေကြမှာပဲ။
ဟိုလူတွေက ပိုဆိုးပေါ့။ ငါဆွေမျိုးအတွက်ပဲ သိတဲ့သူတွေလေ
November 5, 2010 at 4:42 PM
လူလူ အချင်းချင်း.......လူကို လူလို့မြင်တတ်ဖို့......
November 6, 2010 at 3:33 PM
အောင်ထွန်းကို ပုံဖေါ်တာ ကောင်းတယ်နော်။
တချို့ပြည့်ပါတယ်ပြောပြီး ဆယ်ပြားလိုနေတဲ့လူတွေ တွေ့တွေ့နေတော့....။
November 7, 2010 at 12:32 AM
မရေ...အရမ်းကို အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အတွေးလေးတွေ ပေးတဲ့
POST ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ ဖတ်ရတာ အားရကျေနပ်မိရင်း ကိုယ့်ဘာသာလဲ
ပြန်တွေးလို့ ။ ကိုယ်ချင်းစာနားလည်မှု လူတိုင်းကိုယ်စီ ရှိကြရင်းး နေ့ သစ်များစွာကို
ကြိုဆိုချင်ရဲ့။ အားလုံးအေးချမ်းပါစေလို့ှဆန္ဒပြုရင်း....
November 7, 2010 at 3:15 PM
အောင်ထွန်းလို စိတ်ဓါတ်လေးလူတိုင်းမှာ ရှိရင်အရမ်းကောင်း မှာပဲနော်
November 7, 2010 at 4:21 PM
Very Good story .....
November 9, 2010 at 5:04 AM
I came to ur site and read some...you are good one.Thanksalot for share your knowledge as well as warning positive to others...carry on Miss.
November 13, 2010 at 10:24 PM
အောင်ထွန်းရဲ့ လူသားဆန်သောစိတ်ဓါတ်လေးက တကယ်ကိုအတုယူစရာကောင်းပါတယ်။ လောကကြီးမှာ“လူ” လို့သာ အမည်နာမတပ်ထားပေမယ့် လူစိတ်မရှိတဲ့သူတွေအများကြီးပါ။
November 17, 2010 at 11:53 PM
ဒီနေ့ Facebook မှာတွေ့ လို့ ဝင်ကြည့်တာ
အမ ရဲ့ ( အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်လေး ) ကိုဒီနေ့ မှစရောက်ဖူးတာပါ
လိုင်းကောင်းတုန်းလေး ဖတ်လိုက်တာ လူသာားဆန်သော သူ ဆိုတဲ့
၀တ္ထုလေး ၁ ပုဒ်တော့ အားပေးသွားပါတယ်
အမတို့ ကကျေးဇူးတင်စရာ ၊ လေးစားစရာတွေပါ
phyu phyu said...
November 23, 2010 at 9:43 PM
အောင်ထွန်းလို ကျပ်မပြည့်တဲ့လူတောင် လူသားဆန်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိရင်